Pôezia - Wikipedia
Ny pôezia dia karazana literatiora miseho amin' ny endrika miovaova, amin' ny ankapobeny soratana amin' ny fampiasana andalan' andininy, nefa azo soratana koa amin' ny lahatsoratra tsotra, sady manome tombony kokoa ny fiantefan' ny endri-teny amin' ny mpihaino na ny mpamaky; manan-kambara bebe mihoatra ny zavatra ambarany mahazatra mantsy ny teny araka ny fisafidianana azy (heviny sy feony) ary ny fandaharana azy (ngadona, refy, sarin-teny, sns). Saro-paritana ny pôezia ary miova isaky ny vanim-potoana izany famaritana izany, ka ny taonjato tsirairay dia mamaritra anjara asa sy fanehoana samihafa, ary manampy an' izany ny fomba fiasan' ny poeta tsirairay araka ny maha izy azy.
Ny teny hoe pôzia dia avy amin' ny teny grika hoe ποίησις / poiesis, izay avy amin' ny matoanteny hoe ποιεῖν / poiein izay midika hoe "manao" na "mamorona", ka mahatonga ny pôeta ho heverina ho toy ny mpamorona endrika miteny.
Atao hoe tononkalo ny lahatsoratra ao amin' ny pôzia, izay azo faritana ho "asa soratra misy sarin-teny sy aingam-panahy, vita amin' ny teny mirindra, izay matetika miady roa ny tonom-peon' ny faran' andalany, na mifanararakaraka izany na mifanelanelana".
↑ "Tononkalo", in Régis Rajemisa Raolison, Rakibolana malagasy, 1988.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pôezia&oldid=1040719"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 08:04 ity pejy ity.